Phinda ufumane ii-imeyile ze-Outlook kwiiDrive & Disks
DataNumen Outlook Drive Recovery sisixhobo esinamandla sokufumana ii-imeyile ze-Outlook kunye nezinye izinto kwiidrive nakwiidiski ngqo. Ngethuba nje ugcina iifayile ze-PST ze-Outlook kwiimoto zendawo okanye kwiidiski kwixesha elidlulileyo, ngoko nangasiphi na isizathu awukwazi ukufikelela kwidatha ye-Outlook, unokuhlala usebenzisa esi sixhobo somlingo ukufumana idatha yakho.
Phawula: Ukuba ifayile ye-Outlook PST isekhona kwidiski yakho okanye kwi-drive, nceda usebenzise DataNumen Outlook Repair ukubuyisa ii-imeyile kunye nezinye izinto kwifayile yePST.
Ukukhuphela mahalaI-100% ikhuselekile
Thenga ngokuIsiqinisekiso sokwaneliseka kwe-100%
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,627)
Ukubuyisela kwimeko yesiqhelo
Iinkcukacha ezithe xaxe
Ngoba DataNumen Outlook Drive Recovery?
Ukubuyisela kwakhona # 1
I-10 + yezigidi
Iminyaka engama-20 + ye
Ubungqina babathengi bethu
Kwi-HDD eyonakele ngokwenene (ifomathi ephindwe kabini) yayikukufumana kwakhona ngokugqibeleleyo.
Isixhobo sokwenza oko kuthembisayo!
Injineli edla umhlala-phantsi
Ngomhla wamashumi amabini kuFebruwari ka-27
Unxibelelwano olulula kakhulu
Isisombululo sokulandela amatyala aqhelekileyo:
Cima iifayile ze-Outlook .pst kwaye emva koko ukhuphe i-Recycle Bin ngempazamo.
Ukucima ngokusisigxina iifayile ze-Outlook .pst ngempazamo.
Fometha umqhubi oqukethe iifayile ze-Outlook .pst ngempazamo.
Cima ulwahlulo oluqulathe iifayile ze-Outlook .pst ngempazamo.
Ukwahlula kwakhona idiski ngempazamo kwaye lost umqhubi oqukethe iifayile ze .pst.
Ayikwazi ukufunda idiski okanye idiski equlathe iifayile ze- .pst ngenxa yokusilela kwentsimbi.
Idrive okanye idiski equlathe iifayile zepst ayinakuba started okanye yamkelwe ngenxa yenkohlakalo kwi-MBR, itheyibhile yokwahlula okanye naziphi na izizathu.
Kuwo onke la matyala angentla, kunye nawo onke amanye amatyala xa ungakwazi ukufikelela kwidatha ye-Outlook egcinwe kwii-drive zedolophu okanye kwiidiski zakho, ungasoloko ubhenela kuyo DataNumen Outlook Drive Recovery.
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Outlook Drive Recovery v8.5
Inkxaso ye-32bit kunye ne-64bit Outlook 97 ukuya kwi-2019 kunye ne-Outlook yeOfisi 365.
Inkxaso yeWindows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 kunye neWindows Server 2003/2008/2012/2016/2019.
Inkxaso yokufumana kwakhona imiyalezo, iifolda, ipheosts, ukuqeshwa, izicelo zentlanganiso, abafowunelwa, uluhlu lokuhambisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, iijenali kunye namanqaku. Zonke iipropathi, ezinje ngesihloko, ukuya, ukusuka ku-cc, bcc, umhla, njl njl.
Inkxaso yokufumana kwakhona imiyalezo ngeposi, i-RTF kunye nefomathi ye-HTML.
Inkxaso yokufumana iziqhotyoshelweyo, kubandakanya amaxwebhu kunye nemifanekiso eqhotyoshelwe kwimiyalezo kwaye ifakwe kwi-HTML imizimba.
Inkxaso yokufumana kwakhona izinto ezifakiwe, ezinje nge-Excel Worksheets, amaxwebhu eLizwi, njl.
Inkxaso yokufumana kwakhona izinto ezisusiweyo ze-Outlook, kubandakanya imiyalezo yeposi, iifolda, ipheosts, ukuqeshwa, izicelo zentlanganiso, abafowunelwa, uluhlu lokuhambisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, iijenali kunye namanqaku.
Inkxaso yokufumana kwakhona idatha ye-Outlook kwiidrive okanye kwiidiski ezinkulu njenge-16777216 TB (okt 17179869184 GB).
Inkxaso yokwahlulahlula imveliso yePST kwiifayile ezincinci ezininzi.
Inkxaso yokufumana kwakhona idatha ye-Outlook ngokhuseleko lwegama eligqithisiweyo, zombini ukubethela okunyanzelekileyo kunye nokubethela okuphezulu (okanye ukubethela okuhle) kuyaxhaswa. Idatha ye-Outlook inokufunyanwa nokuba awunalo igama eligqithisiweyo.
Inkxaso yokuvelisa ifayile ye-PST emiselweyo kwifomathi ye-Outlook 97-2002 kunye nefomathi ye-Outlook 2003-2016.
Inkxaso yokufumana kwakhona idatha ye-Outlook kuzo naziphi na iintlobo zedrive okanye iidiski, ezinje ngeediski ezinzima, iidrive drive, iifloppy disks, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokufumana kwakhona idatha ye-Outlook kuzo naziphi na iintlobo zeenkqubo zefayile, ezinje ngeFAT, FAT32, NTFSI-Linux Ext2, iLinux Ext3, njl.
Inkxaso yokufumana kwakhona idatha ye-Outlook kwimithombo yeendaba eyonakeleyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona ibhetshi yeedrive kunye neediski.
Ingasetyenziswa njengesixhobo se-forensic sekhompyuter kunye nokufunyanwa kwe-elektroniki (okanye ukufumanisa i-e, ukufunyanwa kwe-eDiscovery).
usebenzisa DataNumen Outlook Drive Recovery Ukufumana kwakhona idatha ye-Outlook
Jonga iTutorial yeVidiyo (Uguqulelo olupheleleyo)
Jonga iTutorial yeVidiyo (Uhlobo lweDemo)
Ngethuba nje ugcina idatha ye-Outlook kwi-drive yakho okanye kwidiski, ngoko nangasiphi na isizathu awukwazi ukufumana okanye ukufikelela kwiDatha ye-Outlook, unokuhlala usebenzisa DataNumen Outlook Drive Recovery ukubuyisa ii-imeyile zangaphandle kunye nezinye izinto kwiidrive okanye iidiski ezenzelwe wena.
QAPHELA: NGOKU EMVA KOKWENZEKA KWENKXASO YEDATHA KWIINKCUKACHA ZAKHO EZIJONGWE KWI-SOURCE DRIVE OKANYE IDISKI, Nceda ungabhali okanye utshintshe nayiphi na idata kuloo drive I-DODR KUYA KUFUNEKA FUNDA IINKCUKACHA KWI-DRIVE OKANYE KWI-DISK kwaye ngekhe ibhale okanye itshintshe nayiphi na idatha!
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona, nceda uvale iMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkqubo.
Ukuba i-drive enengqiqo apho iifayile zakho zangaphandle ze-pst zigcinwe khona kwaye ubungakanani bayo okanye indawo ayikatshintshwa okwangoku, nceda ukhethe ukuba idrayivu eza kuskenwa:
Ngaphandle koko, ukuba i-drive enengqiqo ayisekho, ngenxa yokwahlula kwakhona idiski, lost ye-MBR okanye ulwazi lokwahlulahlula, okanye naziphi na ezinye izizathu, okanye i-drive enengqiqo iyacwangciswa okanye ishenxiswe ngezixhobo zesahlulelo ezinje ngeSahlulo soMlingo, emva koko kuya kufuneka usete yonke idiski enzima yokugcina iifayile zepst njengediski yomthombo eza kuskenwa:
Ukuba ufakela okanye uphume idiski ekhutshwayo kwikhompyuter yakho emva DataNumen Outlook Drive Recovery isungulwe, emva koko ucofe i iqhosha lokuhlaziya uluhlu lweedrive kunye nediski kwibhokisi ye combo.
Ukuba uyayazi inguqulelo yedatha ye-Outlook eza kufunyanwa, unokuyichaza kwibhokisi ye combo ecaleni kwediski okanye ibhokisi yokudibanisa. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Zinqume ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Drive Recovery izakuskena imvelaphi yedatha ye-Outlook ukumisela ifomathi yayo ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, oku kuya kuthatha ixesha elongezelelweyo.
Nceda ucacise igama elikhutshiweyo lefayile. Ngexesha lenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, DataNumen Outlook Drive Recovery iya kubuyisa yonke idatha ye-Outlook kwidiski okanye idrive oyikhethileyo, emva koko ugcine idatha efunyenweyo kwifayile entsha eneli gama.
Ungafaka imveliso yefayile esisigxina ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile.
QAPHELA: UKUTHINTELA UKUBHALWA KWENKCUKACHA YAKHO YOKUKHANGELA KWI-SOURCE DRIVE OKANYE IDISK
Ungakhankanya nefomathi yefayile yemveliso kwibhokisi ye combo . Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Drive Recovery iya kukhupha iifayile ezisisigxina ngokwenguqulo ye-Outlook efakwe kwikhompyuter yakho.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Outlook Drive Recovery Ndiza start ukuskena idrayivu okanye idiski ekhethiweyo, kunye nokufumana ii-imeyile kunye nezinye izinto kuyo. Inkqubela phambili bar
iya kubonisa inkqubela phambili yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuba kukho nayiphi na idatha efunyenwe kwi-drive okanye kwidiski ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo enje:
Ngoku unokuvula ifayile ye-PST emiselweyo kunye neMicrosoft Outlook. Yonke ifolda hierarchy iyakwakhiwa kwakhona kwifayile ye-PST emiselweyo kwaye izinto ziyafunyanwa kwaye zibekwe kwifolda yazo yoqobo. Okwe lost & Izinto ezifunyenweyo, ziya kubekwa kwifolda ezinje ngeRecovered_Group1, iRecovered_Group2, njl.
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.5 ikhutshwa nge-18 kaFebruwari, 2021
IsiSpanish, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiPhuthukezi, isiRashiya, isiJapan, isiKorea kunye nesiTshayina esenziwe lula.
Lungisa ezinye iibugs ezincinci.
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.8 ikhutshwa nge-24 kaDisemba, 2020
Jonga ngokuzenzekelayo uhlaziyo lwemveliso.
Ukuphucula ngokuzenzekelayo kuhlobo lwamva nje.
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.6 ikhutshwa nge-7 kaNovemba ngo-2020
Ukuphucula izinga lokubuyisela.
DataNumen Outlook Drive Recovery 2.0 ikhutshwa ngoFebruwari 5, 2014
Ukuphucula isantya sokubuyisela.
Ukunciphisa ukusetyenziswa kwememori ngexesha lokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Inkxaso ye-Outlook 2013.
Lungisa ezinye iibhugi.
DataNumen Outlook Drive Recovery 1.5 ikhutshwa ngo-Disemba 15, 2010
Ukuphucula ukuskena kunye nesantya sokubuyisela.
Ukunciphisa ukusetyenziswa kwememori ngexesha lenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Thintela ukufumana imixholo ephindiweyo kwinkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Inkxaso yokufumana kwakhona iipropathi ezininzi zento kwibhetshi.
Inkxaso yokubuyisa kunye nokuguqula iipropathi ezinexabiso elininzi.
Ukuphucula ukufunyanwa kwempazamo, ukuqhubekeka kunye nendlela yokwenza ingxelo.
Inkxaso yeMicrosoft Outlook 2010.
Ukuphucula ukuhambelana kwiinkqubo zeWindows 9x.
Ukubuyiswa kweDatha yokuPhuculwa kwedatha eyi-1.0 kukhutshwe ngo-Okthobha 21, 2009
Inkxaso ye-Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003 kunye no-2007.
Inkxaso yeWindows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista kunye neWindows 7.
Inkxaso yokuvelisa ifayile ye-PST emiselweyo kwifomathi ye-Outlook 97-2002 kunye nefomathi ye-Outlook 2003/2007.
Ukufumana imiyalezo kunye nezinye izinto ezivela kwiinkedama okanye ezonakeleyo zeMicrosoft yokuGcina iifayile ezigcinwe ngaphandle kweintanethi (.ost)
Ukufumana kwakhona ii-imeyile ezisusiweyo Outlook Express dbx iifayile.
Ukufumana kwakhona ii-imeyile zonakele Outlook Express dbx kunye neefayile ze-mbx.
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona iifayile zedatha zeMicrosoft Outlook (.pst).